Zininzi iintlobo zezimbali kunye neziqulatho. Ininzi yamandulo imifanekiso yaseJapan yokulungiselela - ikebana. Lo kwakuyinqanaba lokuqala lokujika iintyatyambo eziqhelekileyo zibe yimisebenzi yobugcisa. I-bouquet kwisitayela se-ikebana iqulethe imizila engama-3 ebonakaliswa yimigangatho, ihluke ngobude kunye ne-angle of inclination.
Ukwenza iingoma kunye nezimbali zeentyatyambo. Imithetho yokwenza i-bouquet.
Iintyatyambo zingaphambi kokunqunyulwa ngommese obukhali, okanye ngentsasa, kuze kube semini, okanye ngokuhlwa, xa ubushushu bulele. Kwiintyatyambo ezinobomi, ezifana ne-lilac, ukusikwa kwahlukana, zonke iintyatyambo zisuswa ngamagqabi aphantsi. Kwaye i roses nayo isuswe ameva.
Iintyatyambo ngaphambi kokuba udwebe i-bouquet ziyancitshiswa kwisitya esikhulu esikhulu ngamanzi, ukuxubha kwisiseko seentyantyambo, kufakwa kwindawo epholileyo kwiiyure ezimbalwa.
Xa iintyatyambo zikulungele ukuyila i-bouquet, iziphelo zazo ziphinda zihlanjwe ngommese obukhali (ukuhlaziywa). Kwiintyatyambo ezinjalo, i-carnation, i-cyclamen, i-chrysanthemum engxenyeni engezantsi ye-stem iyanqumla kwi-3 cm.
I-Dahlias, i-paasense, i-poppies, i-hydrangeas, i-peonies kunye nezinye iintlobo zezityalo eziqukethe i-milky juice - iziphelo zitshiswa ngomlilo, okanye zidibaniswe ngamanzi abilayo, kwaye ngoko nangoko zibe ngamanzi abandayo. Kwiintyatyambo kunye nezinye iintlobo, i-anthers isuswe. Ukuqinisekisa ukuba bahlala ixesha elide kwi-bouquet.
Xa zonke iilungiselelo zokuqala zigqityiwe, unokuqhubeka ukuya kwi-bouquet. Ukwenza oku, kufuneka uhlele iintyatyambo ngobukhulu. Emva koko kukhethwa inani elingaqhelekanga lemibala yobude obude. Ubungakanani beentyatyambo ezimfutshane kakhulu ¾ ubude bomaphakathi, ubude bendawo-¾ yezona zide. Ungasebenzisa kwakhona iintyatyambo kwizigaba ezahlukeneyo zokuvula umquba, kwi-budded unrevealed, kwi-already open.
Iintyatyambo kwi-vase ayinamandla, i-angle igcinwa eyahlukileyo kwaye kwimizila eyahlukileyo, inamathela kwimvelo. Kwinqanaba elingaphantsi le-vase likufuphi nakumaziko, kubalulekile ukubeka iintyatyambo ezimnyama nezikhulu. Kwiingingqi ziintyatyambo ezincinci zetoni ezikhanyayo.
Ukuba iifetshane ezincinci zincinci zifanelekile, zisondelelana, musa ukuzalisa zonke iindawo ezingenanto kwi-vase, i-lumen kufuneka ihlale.
Ukumiselwa kobukhulu kunye nesimo sembali.
Ukuze ukwazi ukuba yiyiphi i-bouquet ofuna ukuyenza, qalisa ukucinga malunga nantoni na okwenzayo. Ukuhlobisa itheyibhile lesidlo, isidlo esincinci, kwi-vase encinci, ifanelekile. Kufuneka kube yindawo ejikelezayo. Iziqhamo ezifanayo zifanelekile ukuhlobisa itheyibhile yentlanganiso, iintlobo ezimbalwa zeentyantyambo kunye neentyantyambo zifakwe kumida ukuze zingaphazamise abo bakhoyo.
Ukubukeka kunye nobuchule bokubukeka kwindlu kubeka iziqulatho ezimnandi, kunye neziqu ezinqabileyo kunye neentloko zeentyantyambo ziqhuma.
Ukuhlobisa ifulethi kuyimfashini yokuthenga izitya zangaphandle. Kodwa kungakhathaliseki ukuba i-vase ihle kangakanani, ngaphandle kweentyatyambo. Ngenxa yale ntyatyambo ende ientyantyambo ezinqamle kwiqondo eliphakamileyo elinemifuno efanelekileyo. Uyakwazi ukutshintsha i-bouquet ecaleni kwimijikelo eneentyantyambo ezixhoma. Iintyatyambo kufuneka zibe zihlandlo ezi-2 eziphezulu ngaphezu kwevase. Siyabulela kule misonto, idilesi iya kubonakala iphakamileyo.
Ukuba unomnqweno wokuphambukisa ikhaya lakho, kungcono ukuba wenze iziqulatho kwiindawo ezincinci, zinika ithuba lokucinga. Kuzo kunokwenzeka ukwenza iintlobo ezahlukeneyo ukusuka kumbala yefom ehlukeneyo. Ukuba kukho imibala emininzi, ke ungabali inani labo, kunye nenani elincinci - inani kufuneka libe lingahambelani.
Kwintsimi kunye neeradow iintyatyambo, izitya zebumba ziphelele. I-gladioli, i-large-chrysanthemum-iipasamic ezinkulu zeembotyi. Ivenkile yeglasi eyenziwe ngendlela ehle kakhulu. Ngokufanelekileyo esifanelekileyo kwiziqwenga ezifanayo. Iintyatyambo ezineempawu ezincinci zihlala ziphantsi, ngezinye izihlandlo zithenda.
Ngenxa yokukhethwa kwezimbali kunikwa iibhodi ze-ceramic, azivumeli ukudlula ukukhanya kunye nezimbali zihlala kuzo.
Ukudibanisa imibala yeentyatyambo.
Ukwakheka okuchanekileyo kunye nokwakheka kobungqina bokubumba kweentyatyambo, kufuneka usebenzise ngokufanelekileyo umbala webala.
Zonke iipalati ezikhoyo kwiimeko zenziwa ngokuxuba imibala engundoqo: obomvu, obomvu nohlaza okwesibhakabhaka. Ukudibanisa okungafaniyo imibala: obomvu - eluhlaza; obomvu - obomvu; eluhlaza okwesibhakabhaka Ngulo mgaqo kwaye kufuneka u sasaze iintyatyambo ngemibala ekubunjweni.
Unokubeka iintyatyambo phakathi kwazo ngombala omhlophe, zidibaniswe nayo yonke imibala kwaye uncede ukuphucula ukuqonda kwengcamango yakho.
I-Monochrome okanye i-monochromatic inhlanganisela yenziwe ngamatye ombala ofanayo, kuphela ngamabala ahlukeneyo ombala, afana nombala ophuzi obomvu, ophuzi obomvu, okanye oluhlaza.
Iindlela zokulungisa iintyatyambo kwi-vase
Kwi-vase ephantsi, faka umsila omanzi we-sfangum, uhlanganiswe ngetambo, ngoko ke ukulungiswa okungqongqo kufaka umnxeba ofanayo kumgangatho we-vase. Iimpawu zeentyatyambo zifakwe kwiimbobo ezilungiselelwe.
Indlela yokugqibela yokulungisa, le nto iphosa. Thatha isisombululo sesanti kunye nesimenti sifakwe phantsi kwe-vase ephantsi, kwesi sixazululo, faka izipikili kunye nenqaku. Emva kokuba isisombululo siba nzima, faka iintyatyambo kwiiphonkwane.
Uhlobo olulandelayo luyi-spacers yamaplanga, afakwa kwi-top of the vase kwaye akhonze ngenjongo efanayo neyokudlulileyo.
Zonke izinamathiselo zifihliwe ngotshani, okanye nge-moss.
Izindlela zokwandisa ubomi beentyantyambo eziqingqiweyo.
Ukugcina iintyatyambo zilungele ixesha elide, kufuneka zinqunywe ngokukhawuleza xa ziqala ukuqhakaza. Zigcinwa kwiqondo eliphantsi kunye nomswakama ophezulu kangcono. Ukugcinwa kweentyatyambo ezide ixesha elide, zifakwe ebusweni, zifake kwiphepha kunye nefilimu ukutshatyalaliswa kwexesha elifutshane-kufakwe kwisitya kunye namanzi ebanda, uze uyigubungele ifilimu.
Kuba iintyatyambo, imvula okanye iqhwa lifanelekileyo. Ebusika, kufuneka kube seqondo lokushisa, kwaye ehlobo lipholile. Ama-Orchids, i-daffodils, i-hyacinths zigcinwe kakuhle kumanzi afudumele.
Amanzi kwiintyatyambo kufuneka atshintshe rhoqo, xa utshintshisa amanzi kwiintyatyambo, usike iingcebiso zesitshixo ngesandla esibukhali. Kwi-lilac kunye ne-chrysanthemums, iziqu azinqunywanga, ziphela kuphela kwaye zahlula izicwangciso. I-asters kunye ne-dahlias bathanda isitya sokuhlwa, ukwenzela ukuba banokutshintsha amanzi baze babambe iziqu ezantsi kwamanzi. Zichitha iintyatyambo zakho rhoqo, iifowuni kuphela aziyithandi le nto.
Ukwandisa ubomi bakho "ezifuywayo" kufuneka ufake izisombululo zesondlo. Isisombululo seshukela se-2-5% kunye ne-bactericidal and acidifying substances. Khumbula, ushukela awukwazi ukuthatha i-cyclamens, iinduli zentlambo, i-amaryllis, i-clematis.
Ezinye iintyatyambo nazo zinokuba ngongqangi xa zingathandi ummelwane wazo ekubunjweni. I-Rose kunye nama-cloves awakuthandani kakhulu, ngoko ungawafaki kwisitya esisodwa. Izilwanyana zentlambo, i-daffodils, i-reseda, i-carnations, i-peas ezinomsoco kunye neentyatyambo ze-tubular azihambelani nezinye iintyatyambo, zifanele zifakwe kwiifestile ezihlukeneyo.
Ukulondolozwa kangcono kwembali, unokongeza amasebe athile ancedisayo. Ngokomzekelo, isebe le-thuja okanye le-geranium linceda ukugcina iinguqulelo ezininzi kunye neengoma ezide. Unokufakela i-cypress yesebe kwii-tulips. Iinduli zentlambo ziya kukukholisa kakhulu, ukuba ubeka isiqu se-jellyfish kubo. I-rose iba mnandi kwi-anyanisi.
Ikhonkco yokuvula i-openwork
Indlela yokugubha isikhwama esikhwameni ukususela ekuqaleni
Iklasi yeklasi: iibhokisi ezihle zokugcina izinto ngokwakho
Yintoni endifanele ndenze ukuphefumula?
Indlela yokuseka ubudlelwane bosapho
Sibelana ngemfihlelo, indlela yokwandisa isifuba ngoncedo lwemidlalo
Ukupheka: ityuwa iklabishi ebusika
I-pastry ye-Puff nge ham
Indlela yokuthetha ngokuchanekileyo ngomntwana ozayo?
Amanzi aseRose ekhaya
Iibhatyi zamabhinqa ezityebileyo nezesitenjini
Ilayisi kunye neepasta ezihlaza kunye nama-alimondi
Indlela yokuchonga uhlobo lobume bomntu
Primrose kwigadi - iingcebiso zokukhula
Iqabane lam licinga ukuba ndifuna kakhulu kuye
Indlela yokuphelisa iphunga elimnandi endlwini?